ရှီအာ မွတ်စလင်မ် များ အရေးကြီး အကီဒါ များ မှ ၄ခု အကြောင်း အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဇူလိုငျ ၃, ၂၀၁၇ - ၉:၀၃ ညနေ News Code : 840210 Source : ABNA Link:
အဗ်နာ ။ ။ ရှီအာ မွတ်စလင်မ် များ ခံယူထားသည့် အရေးကြီး အကီဒါ များ မှ ၄ခုဖြစ်သည့် နမာဇ်နှစ်ခုအားတစ်ချိန်တည်း၌ပေါင်းဖတ်ခြင်း။ဝဇူ၌ခြေမျက်စိအထိမဆာပြုခြင်း။ဗစ်မင်လ်လ္လာဟ်စူရဟ်အမ်(ဒ)၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်း။အလ္လာဟ်အချစ်တော်များထံမှာအကူအညီတောင်းခံခြင်း(توسّل)။
အကြောင်း ကို သေချာ သိရင် လက်ရှိ ရှီအာ အကျော် အမော် အာလင်မ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ နာစေရ် မကာရေမို ရှီရာဇီး ရေးသားထားသည့် ကိုအောက်ပါအတိုင်း လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
ဝဇူ၌ခြေမျက်စိအထိပြုလုပ်ခြင်းကိစ္စသည်စွန်နီအိုလမာများဖြစ်မှ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ)၏နောက်လိုက်ရှီအာများကိုစောဒကတက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့အေနဖြင့်ခြေမျက်စိအထိမဆာပြုခြင်းကိုဖူလုံသည်ဟုမသတ်မှတ်ဘဲ၊ဆေးကြောခြင်းကိုဝါဂျစ်(ပ)ဟုသတ်မှတ်ထားကြပေသည်။
အဗ်နေကစီး(ကျော်ကြားသောစွန်နီပညာရှင်)အနေဖြင့်မိမိ၏သဖ်စီးစာအုပ် «تفسير القران العظيم» ၌ရေးသားဖော်ပြထားသည်မှာ-
၎င်းတို့အနေဖြင့်အားလုံးကိုရိုးရိုးသာမန်လူသားများထင်ခဲ့ကြပြီးတစ်နေ့သုတေသီများ၊ပညာရှင်များအနေဖြင့်မိမိတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထောက် ကြမည့်မဟုတ်၊မေးခွန်းများထုတ်ကြမည်မဟုတ်၊အစ္စလာမ်သမိုင်းစာမျက် နှာ၌အရှက်ရအောင်လုပ်ကြမည်မဟုတ်၊ဟုထင်ခဲ့ကြချေသည်။
“အိုအီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အသင်တို့အနေဖြင့်န မာဇ်ဝတ်ပြုမည့်အခါအသင်တို့၏မျက်နှာ၊လက်များကိုတစ်တောင်ဆစ်အထိဆေးကြောပါလေ၊ဦးခေါင်းနှင့်ခြေမျက်စိ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအထိ“မဆာ” ပြုလုပ်ပါ လေ။
အာယတ်တော်၌ أرجلكم ဆိုသည့်စကားလုံးကိုသုံးစွဲထားပြီး رؤوسكم ဆိုသည့်စားလုံးအပေါ်၌အာရဘီသဒ္ဒါအရ عطف ပြုလုပ်ထားပါ သည်သို့ဖြစ်ပါ၍ أرجلكم အား أَرْجُلَكُم လုပ်၍ဖတ်ဖတ် أرجلِكمလုပ်၍ဖတ် ဖတ်အာရဘီ သဒ္ဒါအရ“မဆာ”ဟုသာအဓိပ္ပါယ်ထွက်မှာဖြစ်ပြီး ဆေးကြော ခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ထွက်မည်မဟုတ်ချေ။
၁။အဗ်နေဟဇ်မ်၏ الأحكام فى أصول الأحكا စာအုပ်အရတမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)စွန္နတ်နှင့် ဟဒီးစ်တော်များကိုကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့်အထက်ပါ အာယတ်တော်အားمنسوخ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဟုဆိုထား၏။
ခြေမျက်စိအထိဆေးကြောခဲ့ကြောင်းတမန်တော်မြတ်ကြီးစွန္နတ် တော်၌ပါရှိပေရာ။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ခြေမျက်စိအထိ“မဆာ”ပြုရ မည်ဟုဆိုသောအာယတ်တော်သည်ပယ်ဖျက်သွားချေပြီ။
အမှန်တကယ်လေ့လာမည်ဆိုလျှင်ပထမအချက်သည်ကား-သဖ်စီးပညာရှင်များအားလုံးသည်စူရဟ်ယေမာအေဒါသည်တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)အပေါ်ကျမြန်းခဲ့သောနောက်ဆုံးစူရဟ်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အာ ယတ်တော်မှ၊ပယ်ဖျက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလက်ခံထားပေသည်။
ဒုတိယအချက်သည်ကား-ရှေ့၌တင်ပြမည့်ရီဝါယတ်တော်များတွင် တမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ခြေမျက်စိတော်ကိုဆေးကြောခဲ့ပါသည်ဟုဆိုပြီး၊
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်အားရီဝါယတ်တော်ကိုအခြေခံ ပြီးပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိပါသလား? ဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်ပါသလား?
ကျွန်တော်အနေဖြင့်ပြီးခဲ့သောခေါင်းစဉ်များ၌ရေးသားဖော်ပြထားသည်ကား- မည်သည့်အခါမဆိုရီဝါယတ်တော်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင် လာလျှင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်ချိန်ကိုက်ကြည့်ရမည်။ကိုက်ညီသောရီဝါယတ်ကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊မကိုက်ညီသောရီဝါယတ်ကိုလက်ခံစရာမလိုကြောင်းဟုဆိုသည့်ပုံသေနည်းရှိနေပြီးဖြစ်ပေသည်ဟုရှေ့၌ရေးသားသီကုံးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ဤကဲ့သို့သောအခြားစာအုပ်တစ်အုပ်ဂျစာစ်၏ أحكام القرآنစာအုပ်အ တွဲ(၂)စာမျက်နှာ(၄၃၄)တွင်ဝိုဇူ၏အာယတ်တော်သည် مجمل (အဖြေမရေ မရာ)ဖြစ်ပါသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်“အဟ်သေရားသ်”ပြုသည့်အနေဖြင့်ခြေမျက်စိအထိဆေးကြောရပေမည်။ထိုမှသာလျှင်ဆေးကြောခြင်းနှင့် “မဆာ”ပြုခြင်းနှစ်ခုစလုံးအထမြောက်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်ဟုဆိုထား၏။
အမှန်တကယ်လေ့လာသုံးသပ်မည်ဆိုလျှင်ဆေးကြောခြင်းနှင့်“မ ဆာ”ပြုခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်ဆိုလိုချက်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကြောင်း၊ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုဆေးကြောခြင်းကို“မဆာ”ဟုမဆိုနိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိရပေမည်။
၃။ဖခ်ရေရာဇီးအနေဖြင့်လည်း“အကယ်၍ أرجلِكم ဟုဖတ်ပြီး رؤوسكم အပေါ် عطف လုပ်ပါက“မဆာ”ပြုလုပ်ဖို့အဓိပ္ပါယ်ထွက်၏။သို့သော်ဤနေရာ၌ “မဆာ”ဆိုသည်မှာပွတ်သပ်ခြင်းမဟုတ်ပဲခြေမျက်စိအထိဆေးကြောရာ၌
အကယ်၍ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်များကို(အ ခြားအာယတ်တော်ခိုင်လုံသောဟဒီးစ်တော်များကိုမကိုးကားပဲ)မိမိတို့အ ထင်အတိုင်းသဖ်စီးလုပ်ပါကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော် များအပေါ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့မလိုတော့ချေ။“မဆာ”ကိုပွတ်သပ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်မကောက်ပဲ၊ရေအများကြီးမသုံးဖို့၊မဖြုန်းဖို့ဆိုပြီုးအဓိပ္ပါယ်ပြောင်း နိုင်လျှင်အခြားအာယတ်တော်များအတွက်လည်းအာမခံချက်မရှိချေ။
နောက်တစ်နည်းဆိုရလျှင်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ကျင့်စဉ်၊ကျင့်ရပ်၊ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်းပြင်း ထန်ထန်လက်ခံသလို၊အစ္စလာမ်ပထမဦးဆုံးထွန်းကားချိန်ကမွတ်စလင် များပင်ဤအဆင့်အထိမရောက်ကြပေ။
ဤကဲ့သို့အိုမာရ်အနေဖြင့်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်းမည်သည့်သာဓက မျှစောဒကတက်ပြီး“ခင်ဗျားကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်အထောက်အထားရှိနေပါလျက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အဂ်ျသေဟဒ်လုပ်ရပါသ နည်း?”ဟုမမေးခဲ့ကြချေ။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏သတ်မှတ်ထားသောဟလ္လာဟ်ကိုဟရမ်၊ဟရမ်ကိုဟလ္လာဟ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဟုပင်ဆိုကြပေမည်။ဆိုလိုသည်ကားအဂ်ျသေဟဒ်သည်ခိုင်လုံသောကျမ်းတော်မြတ်အ ထောက်အထားရှေ့၌မည်သူမျှသုံးခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အဟ် ကမ်ပယ်ဖျက်ခံရပြီဟုဆိုမရချေ။
ဤအတွက်ကြောင့်အချို့ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအနေဖြင့်အဟ်ကမ် မေအေလာဟ်ဟီအားပြောင်းလဲဖို့သတ္တိရှိကြသည်။လက်ရှိကိစ္စဝိုဇူ၌“မဆာ” ပြုရ မည်ဟုဆိုထားကိစ္စကိုဆေးကြောရမည်ဟုဆိုခြင်းသည်ထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက်သက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အချို့အနေဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ခြေထောက်များသည်အညစ်အ ကြေးများ၊ပေတေနေသဖြင့်မဆာမလုပ်ဘဲ၊ဆေးကြောသင့်သည်ဟုယူဆ တွေးခေါ်ကြသည်။သို့သော်ဤယူဆတွေးခေါ်မှုမမှန်ချေ။အကြောင်းသည်ကား-ထိုခေတ်(အစ္စလာမ်အစဦးပိုင်း)၌ဖိနပ်မစီးသောအုပ်စုတစ်စုရှိ၏။
ဤအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေသည်။تفسير المنار ပြုစုသူအနေဖြင့် ဝိုဇူအာယတ်တော်နှင့်ပက်သက်ပြီး“မဆာ”အစားဆေးကြောရမည်ဟုအ ကြောင်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။၎င်းအကြောင်းပြချက်သည်ကား“မဆာ”လုပ် ခြင်းဖြင့်အကျိုးမရှိသည့်အပြင်ခြေ၌ကပ်နေသောဖုန်များ၊သည်အညစ်အ ကြေးများကိုပိုမိုတိုးပွါးစေပြီး၊လက်ကိုပါညစ်ပေစေသည်ဟုဆိုထား၏။
ထိုနည်းတူစွာအဟ်လေစွန္နတ်၏ကျော်ကြားသောဖေကာပညာရှင်တစ်ဦးအဗ်နေကူသမေ(ဟီဂျရီ၆၂၀ကွန်လွန်)အနေဖြင့်အချို့သူများ၏စကားကိုတင်ပြသည်မှာ-“ခြေထောက်သည်အများဆုံးအချိန်အခါ၌ညစ်ပတ်တတ် သောကြောင့်ဦးခေါင်း“မဆာ”လုပ်ပြီးနောက်ခြေထောက်ကို“မဆာ”လုပ်ဘဲ ဆေးကြောလျှင်ပိုမိုသင့်တော်လျောက်ပတ်၏ဟု” တင်ပြထား၏။
ဦးခေါင်းအားလက်ညိုးတစ်ချောင်းတည်းနှင့်“မဆာ”ပြုပိုင်ခွင့်ကိုအ ချို့ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များကခွင့်ပေးထားသဖြင့်၊လက်ညှိုးးတစ်ချောင်းတည်းနှင့်ဦးခေါင်းရှိအညစ်အကြေးများမကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ချေ။ထိုအတွက် ကြောင့်ခြေထောက်ကိုလည်းဦးခေါင်းကဲ့သို့“မဆာ”ပြုလုပ်ရပေမည်။
ခြေညစ်ပတ်လို့ဆေးကြောရမည်ဆိုလျှင်ဦးခေါင်းကိုအဘယ် ကြောင့်မဆေးကြောကြပါသနည်း။ခြေကိုလည်းဆေးရမည်ဟုယူဆခြင်း သည်မရိုးသားကြောင်းထင်ရှားနေပေသည်။(ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏နောက်ဆုံးစူရဟ်အဖြစ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ကိုယ်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)အားပေးထားသည့်အမိန့်“မိမိ၏မျက်နှာ၊နှင့်လက်များကိုတစ်တောင်ဆစ်အထိဆေးကြောပါလေ။ဦးခေါင်းနှင့်ခြေ (မျက်စိအထိ)ကို “မဆာ”ပြုလုပ်ပါဟုဆိုထားသည်ကိုမပြည့်စုံ၊မဖူလုံသောလူသားဥာဏ်၊စလ်စဖေသုံးပြီးဆန့်ကျင်ကာအကြောင်းပြချက်များထုတ်ခြင်း ဖြင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များနှင့်မအပ်စပ်မှုများကိုထည့်သွင်း မည်ဖြစ်ပါသလော!
မှန်လှပေသည်။သဖ်စီးပေရိန်း(تفسير به رأى )နှင့်ခိုင်လုံသောအ ထောက်အထားရှိလျက်အဂ်ျသေဟဒ်ပြုခြင်း(اجتهاد در مقابل نص)ဖြင့်ကြီးမား သောဒုက္ခနှစ်ခုကိုဖြစ်စေပါသည်။အချို့နေရာများ၌အစ္စလာမ်ဥပဒေကိုဖျက်ဆီးဖြစ်ကြသည်။
ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းကိစ္စသည်စစ်မှန်သော၊ဘက်မလိုက်သော၊သုတေသီတိုင်းကိုအံ့ဩသင့်စေပါသည်။ဝိုဇူ၌“မဆာ”ကိုလက်မခံသောသူ များသည်အခက်အခဲနှင့်မရင်ဆိုင်ရချိန်၊ခရီးမထွက်ချိန်၊အခြေအနေတိုင်း၌ ခြေထောက်အားမဆေးကြောပဲ၊ဖိနပ်အပေါ်“မဆာ”ပြုနိုင်ကြောင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။
الخفّين ; هرگاه دو پاى من قطع شود براى لئن تقطع قدماى أحبّ إلىّ من أن امسح على
روى كفش ها كنم من بهتر از آن است كه (هنگام وضو) مسح بر
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏စစ်မှန်ပြီး၊စိတ်ချရသော၊ဟဒီးစ်တော် တစ်ခုသည်ကား“အကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အသင်တို့အကြားမှသွားတော့မည် ဖြစ်ပါသဖြင့်၊တန်ဖိုးကြီးသောအရာနှစ်ခုကိုထားပေးခဲ့မည်။တစ်ခုသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏စာအုပ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖြစ်ပြီး၊ကျန်တစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)ဖြစ်ချေသည်။အသင်တို့အနေဖြင့်၎င်းနှစ်ခုအားမြဲမြံစွာလက်ကိုင်ထားပါက(အမိန့်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါ။)လုံးဝ၊လမ်းလွဲ၊လမ်းမှားသို့ရောက်မည်မဟုတ်ချေ။”
مَسْحُ الخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الحَجِّ ثَلاَثَةٌ لاَ اتَّقِى فِيهِنَّ أحَداً شُرْبُ المُسْكِرِ، وَ
အေမာမ်မီးယာ(ရှီအာ၁၂ပါးအေမာမ်)ဓမ္မသတ်ပညာရှင်ကြီးများအ နေဖြင့်အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏ရီဝါယတ်တော်များနှင့်အညီဖြင့်သောဝိုဇူ၌ ခြေနှစ်ဘက်စလုံးကို“မဆာ”ပြုရမည်ဝါဂျစ်(ပ)ဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။အထက်ဖေါ်ပြထားသောအေမာမ်မိုဟမ္မဒ်ဘာကဲရ်(အ.စ)၏ဟဒီးစ်တော်နှင့်အ ခြားဟဒီးစ်တော်အမြောက်အများရှိပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ခြေတော်များကို“မဆာ”ပြုလုပ် ကြောင်းမဖေါ် ပြထားသောနာမည်ကျော်စွန်နီကျမ်းများမှာ-
၂။ ـ مسند احمد
အံ့ဩစရာကောင်းသောအချက်တစ်ခုသည်ကား-အားပိုကြီးသကဲ့ သို့ကျော်ကြားသောသဖ်စီးပညာရှင်အနေဖြင့်ဝိုဇူ၌ခြေများကို“မဆာ”ပြုဖို့“မဆာ”လုပ်ရမည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ရီဝါယတ်တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း၊၎င်းကိုရှီအာ များအနေဖြင့်သက်သေအဖြစ်သုံးနေကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
الْقَدَمَيْنِ أحَقُّ بِالْمَسْحِ عَنْ عَلِى بْنِ أبِى طَالِب(عليه السلام) قَالَ : كُنْتُ أرى أنَّ بَاطِنَ
اللهِ(صلى الله عليه وآله) يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ
မှတ်ချက်။ ။အေမာမ်မာစူးမ်များသည်အလ္လာဟ်ရစူလ်၏အမိန့်နှင့်ဆန့်ကျင် ဘက်မည်သည့်အခါမျှမစဉ်းစား၊မစိတ်ကူးခဲ့ချေ။(ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
ဤဟဒီးစ်တော်၌ထင်ထင်ရှားရှားတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ခြေတော် များကို“မဆာ”ပြုခဲ့ကြောင်းဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏ဆင့်ပြန်မှုဖြစ် ကြောင်းသိရပေသည်။
ثلاثاً و غسل ذارعيه ثلاثاً و مسح رأسه واحدة... و رجليه إلى الكعبين استنشق
“အဘီးမသ်ရ်ဆင့်ပြန်သည်မှာ-ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်မစ်ဂျစ်တွင်မောင်လာအလီ(အ.စ)အနီးမှရှိနေသူတစ်ဦး၊ တစ်ယောက်သည်ဝင်ရောက်လာပြီးဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အားကျွန် တော်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဝိုဇူအားလုပ်ပြတော်မူပါဟုလျောက် ထားလေ၏။
ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)သည်ရေတခေါင်းနှင့်ရေယူလာရန်(ဂျနာပေ)ကဲဘရ်အားမိန့်တော်မူ၏။ပြီးနောက်လက်နှင့်မျက်နှာအား(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါဆေးကြောပြီး၊လက်ညှိုးအားပါးစပ်အတွင်းထည့်၏။(လက်ဖြင့်သွားတိုက် ၏။) (၃)ကြိမ်၊(၃)ခါနှာခေါင်းအတွင်းရေထည့်လိုက်၊ထုတ်လိုက်လုပ်တော်မူ၏။(မျက်နှာနှင့်လက်ကို(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါဆေးကြောပြီးနောက်(၁)ကြိမ်၊(၁)ခါ ဦးခေါင်းနှင့်ခြေများကိုမဆာပြုတော်မူ၏။”
အထက်ပါဟဒီးစ်တော်နှစ်ခုအားသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဟဒီးစ်တော်နှစ်ခုစလုံး သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)လက်ထက်မှဖြစ်ပြီးဆင့်ပြန်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သည်မောင်လာအလီ(အ.စ)ဖြစ်ကြောင်း၊သို့သော်မဆာပြုသည့်အချက်မှလွဲ၍အခြားအရာများကွဲနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
ثلاثاً و يديه ثلاثاً ثلاثاً ثمّ مسح برأسه و رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثمّ قال: رأيت وجهه
أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) عنده من
အွစ်မန်းဝိုဇူပြုရန်၊ဝိုဇူပြုရာနေရာသို့ရောက်လာပြီး၊ရေတောင်း၏။ပလုတ် ကျင်းပြီး၊နှာခေါင်းထဲရေထည့်လိုက်၊ထုတ်လိုက်လုပ်၏။ထို့နောက်(၃)ကြိမ်၊ (၃)ခါမျက်နှာနှင့်လက်များကိဆေးကြောပြီး၊(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါဦးခေါင်းနှင့်ခြေ များကိုမဆာပြုလေ၏။
ဤဟဒီးစ်တော်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်အွစ်မန်းတစ်ဦးထဲမဟုတ်ဘဲ၊အ ခြား သာဝကတော်များပါတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ခြေတော်များကို“မဆာ”ပြုခဲ့လုပ်ကြောင်းဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်၏။(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါဦးခေါင်းနှင့် ခြေများကို မဆာပြုခြင်းသည်အချို့သာဝကများ၏အမြင်၌မွတ်စ်သာဟပ်ဖြစ်နိုင်ပြီး(သို့)ရဝီးအနေဖြင့်မေ့မှားသွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
صلوة لأحد عن رفاعة بن رافع أنّه سمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: أنّه لا تتمّ
المرفقين حتّى يسبغ الوضوء، كما أمره الله عزّ و جلّ يغسل وجهه و يديه إلى
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံမှနားသောတဆင်ရသည်မှာ-မည်သူမဆိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အမိန့်အတိုင်းဝိုဇူတွင်မျက်နှာနှင့်လက် များကိုတစ်တောင်ဆစ်အထိဆေးကြောခြင်း၊ဦးခေါင်းနှင့်ခြေဖမိုးအပေါ် မဆာပြုခြင်းကိုမလုပ်မခြင်းနမာဇ်လက်ခံတော်မူခြင်းခံရမည်မဟုတ်ချေ။ဟု ဖြစ်ပေသည်။
الله عليه وآله) فلمّا اجتمعوا قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلاّ ابن اخت صلى )
وجهه ثلاثاً و ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً و مسح برأسه و ظهر قدميه ثمّ صلّى بهم غسل
အဗူမာလစ်အရ်ှရီမှဆင့်ပြန်သည်မှာ၎င်းအနေဖြင့်မိမိလူမျိုးအား ဟောကြားတော်မူသည်မှာ-အားလုံးစုရုံးကြပါလေ။ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်တမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ဖတ်တော်မူခဲ့သောနမာဇ်ကိုဖတ်ပြမည်။အားလုံးရောက်လာပြီး နောက်၊ထပ်၍ပြောကြားသည်ကား-အသင်တို့အပြင်အခြားတစိမ်း ကောရှိပါသလား?
*ဤအချက်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)၏နမာဇ်နှင့်ဝိုဇူကိုသင်ကြားပြသရန်အခက်အခဲရှိနေကြောင်းထင်ရှား နေပေသည်။
ထို့နောက်ရေတခေါင်းနှင့်ရေထည့်ပြီး(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါပုလုတ်ကျင်း ခြင်း၊နှာခေါင်းအတွင်းရေထည့်လိုက်၊ထုတ်လိုက်လုပ်ခြင်း၊ကိုပြုလုပ်လေ၏။ ပြီးနောက်၊(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါမျက်နှာနှင့်လက်ကိုဆေးကြောလေ၏။(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါဦးခေါင်းနှင့်ခြေဖမိုးအပေါ်မဆာပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့နှင့်အတူနမာဇ်ဝတ်ပြုလေ ၏။
အထက်ပါရီဝါယတ်တော်များသည်အဟ်လေစွန္နတ်၏ကျော်ကြား သောကျမ်းများမှကျော်ကြေားသောရီဝါယတ်တော်များထံမှအနည်းငယ် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်စူရဟ်မာအေဒါသာမဆာပြုရမည်ဆိုကာအာ ယတ်တော်ကိုလက်မခံသည့်အပြင်ဆေးကြောရမည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ကောက် ကြသူများဖြစ်ကြပေသည်။
စွန်နီများ၏ကျမ်းများ၌ဆန့်ကျင်ဘက်ရီဝါယတ်တော်များရှိနေပါ သည်။ပထမဆုံးရီဝါယတ်တော်များ၌တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ဝိုဇူပြု ချိန်၌ခြေတော်များကိုဆေးကြောကြောင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။အခြားရီဝါ ယတ်တော်များ၌ခြေတော်များကိုမဆေးကြောပဲ၊မဆာပြုခဲ့ကြောင်း၊အချို့ရီ ဝါယတ်တော်များ၌ဖိနပ်များအပေါ်“မဆာ”ပြုခဲ့ကြောင်း၊ဖေါ်ပြထားပေသည်။!
ဆန့်ကျင်ဘက်ရီဝါယတ်တော်များနှင့်ပက်သက်၍ علم اصول ၏ပုံသေနည်း ကိုမေ့ထားဖို့မသင့်ပေ။ပုံသေနည်းသည်ကား- ရီဝါယတ်ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခု ကိုတွေ့ရပါက၊ပထမရီဝါယတ်နှစ်ခုကိုအဆင်ပြေအောင်စုစည်းပေးရမည်။(အများနားလည်ရပေမည်။)
စုစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်တိုက်ကြည့်ရမည်။ ကိုက်ညီမှုရှိသောရီဝါယတ်တော်ကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊မကိုက်ညီသော ရီဝါယတ်တော်အားငြင်းပယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍မဆာပြုခြင်း၊ဆေးကြောခြင်းကိုပြဆိုသောရီဝါယတ်တော်များကိုစုပေါင်းကြည့်ရမည်။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ဝိုဇူ၌မဆာပြု လုပ်လေ၏။ပြီးနောက်သန့်ရှင်းစေရန်နှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်တစ်ခါတစ် လေခြေများကိုမဆေးမနေရဟုမသတ်မှတ်ပဲဆေးကြာလေ၏။
အချို့ရီဝါယတ်တော်များအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့ခြေများကိုဆေးကြောခဲ့ ခြင်းကိုမဆေးကြောမနေရဟုထင်ခဲ့ကြပေသည်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရှီအာများအကြား၌မဆာပြုပြီးနောက်သန့်ရှင်းစေရန်၊ကျန်းမာရေးအလို့ငှာခြေများကိုဆေးကြောသူအမြောက်အများရှိကြပေ သည်။
ဤကဲ့သို့ဆေးကြာခြင်းမှပူပြင်းသောဒေသများ၌ခြေပိတ်၊နောက်ပွင့်ဖိနပ်များကိုအသုံးပြုသဖြင့်ခြေများအားကောင်းကောင်း၊မွန်မွန်အညစ်အ ကြေး(ဖုန်မှုန့်များစသည်ဖြင့်)ကိုမကာကွယ်နိုင်သဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပေ သည်။
မဆာပြုခြင်းဖြင့်ခြေများ၏အညစ်အကြေးများမပျောက်ကွယ်နိုင် ကြောင်း၊ဆေးကြောမှသာလျှင်ဖျောက်ဖျက်နိုင်ကြောင်းခံယူထားသောအချို့စွန်နီအိုလမာများ၏အချို့ရေးသားမှုများကိုကျွန်တော်အနေဖြင့်တင်ပြပြီးဖြစ်ပါ သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍တစ်နေ့(၅)ကြိမ်နေ့နှင့်ညခြေများကိုဆေးကြောဖို့ကမ္ဘာ ဒေသအသီးသီးရှိနေထိုင်သူများအတွက်အခက်အခဲကြီးတစ်ခုအဖြစ်မဖြစ် နိုင်ပါသလော!ဤအတွက်ကြောင့်အချို့သူများသည်ဝိုဇူနှင့်နမာဇ်ကိုရှောင် ကြပေလိမ့်မည်။
ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏ခြေများကိုမဆာပြုလုပ်ခံရမည်ခံယူ ထားကြောင်းသာဝကတိုင်းသိရှိပေသည်။(ဤအတွက်ကြောင့်ဆေးကြောဖို့မအ်ဝေယာအနေဖြင့်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြံဟဒီးစ်ပြုစုထားကြောင်းဥာဏ်ရှိသူတိုင်းအတွက်လယ်ပြင်ကိုဆင်းသွားသကဲ့သို့ထင်ရှားနေပါသည်။(ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
ထို့နောက်ခိုင်ဗဲရ်စစ်ပွဲတွင်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)ပက်သက် သောဟဒီးစ်တော်များကိုတင်ပြပြီးမိုဗာဟေလာအကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ သည်။
ပထမအုပ်စု။ ။အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လျှင်သီလ၊သမာဓိရှိသူများဖြစ်ကြ သည်။(သို့သော်သာမန်ရိုးရိုးလူများပင်တည်း။)နီးစပ်မှုရရှိရန်အတွက်ဟဒီးစ် အတုများကိုပြုစုကြပေသည်။အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဘာသာရေးသမားဖြစ် ပြီး၊လူထုအနေဖြင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်ရွတ်မှု၌စွဲဆောင်မှုရှိစေရန်၊အံ့ဩဖို့ကောင်းသောစူရာဟ်များ၏မြင့်မြတ်မှုနှင့်ပက်သက်၍ဟဒီးစ်အတု များကိုပြုစုပြီး၊တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မှဆင့်ပြန်သည်ဟုဆိုကြလေသည်။
ဝမ်းနည်းစရာမှာဤကဲ့သို့သော်သူများ၏အရေအတွက်သည်မနည်းချေ။ ကျော်ကြားသောစွန်နီပညာရှင်တစ်ဦးကရ်သွာဘီးအနေဖြင့်မိမိစာအုပ်تذكار စာမျက်နှာ(၁၅၅)၌ရေးသားထားသည်ကား-စူရာဟ်များ၏မြင့်မြတ်မှု နှင့်ပက်သက်၍ဟဒီးစ်အတုများပြုစုသောရီဝါယတ်တော်များကိုယုံ၍မရ ချေ။
ဤပညာရှင်အနေဖြင့်မိမိစာအုပ်အခြားစာမျက်နှာ၌“ဟေကမ်”နှင့်အခြားဟဒီးစ်ကထိကများထံမှတင်ပြသည်မှာ-သီလ၊သမာဓိရှိသောပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးအနေဖြင့်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်၏စူရာဟ်များ၊မြင့်မြတ်မှုနှင့်ပက်သက်၍ဟဒီးစ်အတုများပြုလုပ်ထား၏။၎င်းအားတစ်ဦး၊တစ်ယောက်ကမေး မြန်းရာဤကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ပြုရပါသနည်း?အဖြေပေးသည်မှာ-
“မည်သူမဆိုလိမ်လည်ပါက၊၎င်းအတွက်နေရာသည်ကားဂျဟန္နမ် ဖြစ်ချေ သည်”ဟုဆိုရာ၊၎င်းအနေဖြင့်အဖြေပြန်ပေးသည်မှာ- တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)မိန့်တော်မူသည်မှာ- ... من كذب علىّ
ကူရ်သိုဘီးတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲဤကဲ့သို့သော်ဟဒီးစ်တော်များကိုတင်ပြထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊အခြားစွန်နီပညာရှင်များအနေဖြင့်လည်းတင်ပြထားပါသည်။(ပိုမို၍ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာနိုင်ရန်တန်ဖိုးကြီးမားသော “အလ်ဂဒီးရ်”စာအုပ်အတွဲ(၅)ရှိ وضّاعين كذّابين و ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ကိုလေ့ လာသင့်ပေသည်။)
ဒုတိယအုပ်စု။ ။ထိုသူများသည်ငွေအမြောက်အများရရှိရန်အလို့ငှာမအ် ဝေယာနှင့်ဗနီအိုမိုင်ယာ၏အကျိုးအမြတ်အတွက်နှင့်ဟဇရတ်(သ)အလီ (အ.စ)အားပုတ်ခတ်ကာဟဒီးစ်အတုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
သာဓကအားဖြင့် سمرة بن جندب ဖြစ်ပေသည်။မအ်ဝေယာဆီမှဒီးရ် ဟမ်လေးသိန်းယူပြီး၊ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အားပုတ်ခတ်၍လုပ်ကြံခဲ့သူ (အဗ်နေမိုလ်ဂျင်(လ.န)အားချီးကျူးသောဟဒီးစ်အတုပြုလုပ်ကာအာယတ်တော်- ... مَرْضَاةِ اللهِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَنْ يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ စူရာဟ်ဘကရဟ်
အာယတ်အမှတ် (၂၀၇)သည်အဗ်နေမိုလ်ဂျင်(လ.န)အတွက်ကျရောက် လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ... الدُّنْيَا الْحَيَاةِ قَوْلُهُ فِى مَنْ يُعْجِبُكَ وَمِنَ النَّاسِ စူရာဟ်ဘကရဟ် အာယတ်အမှတ်(၂၀၄)သည် ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) အတွက်ကျရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထား၏။ الأكاذيب من هذه بالله نعوذ
ကျွန်တော်တင်ပြထားခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့(စွန်နီ)အနေဖြင့်ဝိုဇူ၌ ခြေများကိုမဆာလုပ်ရမည့်အစားဆေးကြောဖို့ဝါဂျစ်(ပ)ဆိုထားပြီး၊ဖိနပ်အ ပေါ်မဆာပြုနိုင်ကြောင်း၊တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဟဒီးစ်တော်အချို့ကို သက်သေအဖြစ်တင်ပြထား၏။
ရှင်းပြရမည်ဆိုလျှင်-အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)နှင့်နောက်လိုက်ရှီအာ အေမာမ်မီးယာဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအနေဖြင့်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းကို ခွင့်ပြုမထားချေ။သို့သော်မြောက်များစွာသောစွန်နီဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအနေဖြင့်ခရီး၌ဖြစ်ဖြစ်၊နေရပ်၌ဖြစ်ဖြစ်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခွင့်ပေးထားပြီးအချို့အနည်းငယ်သာလိုအပ်ချိန်(ခရီး…)၌သာပြုခွင့်ပေးထားပေ၏။
မြောက်များစွာသောစွန်နီဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအနေဖြင့်ခြေများအား ဆေးကြောခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကို လုပ်လျှင်လုံလောက်သည်ဟုဆိုထားကြ၏။
မေးခွန်း(၃)တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်လွတ်မြောက်အောင်မြင်ရန်အ တွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်အတူတူ၊ အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)မိန့်ဆို ထားသောခြေများကိုမဆာပြုရမည်ဆိုသည့် အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏အဆို အမိန့်များကိုလက်မခံရပါသနည်း?
အဘယ်ကြောင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် حاكم နှင့်مرجع မရှိရပါသနည်း?
الفقه على المذاهب الاربعه စာအုပ်၌အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်ဖိနပ် အပေါ်မဆာလုပ်ရန်ဝါဂျစ်(ပ)ဖြစ်ပြီး၊ကျန်အချိန်များ၌ခွင့်ပြုထား၏။သို့သော်ခြေများကိုဆေးကြောခြင်းကိုပိုမိုမြင့်မြတ်သည်ဟုဆိုထား၏။
ထို့အပြင်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးရီဝါယတ်အမြောက်အမြားဖြင့်သေချာသွားပြီးဖြစ်၍ဟဒီးစ်များအနေဖြင့် تواتر ဟဒီးစ်လောကတွင်စိတ်ချရ သောလမ်းတစ်ခု၊အထိရောက်သွားပြီးဟုဆိုလေ၏။
ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုသည်ကားစာရေးဆရာအနေဖြင့်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပက်သက်၍အကျယ်တဝင့်မည်ကဲ့သို့သောဖိနပ်များဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊မဆာ၏အတိုင်းအတာ၊အချိန်(ဘယ်နှစ်ရက်)သုံးရပါသနည်း ? ဖိနပ်အပေါ်မဆာလုပ်လျှင်မွတ်စ်သဟပ်များ၊မကရူများ၊မဆာကို ဖျက်ပေးသောအရာအချက်များ၊စည်းကမ်းချက်များ၊ လုံးဝသရေဖြစ်ရမည်။ (သို့)သရေမဟုတ်ပါကဖူလုံ၊မလုံ၊အဖွင့်ပါသောဖိနပ်များ၊အဖွင့်မပါသောဖိ နပ်များနှင့်ပက်သက်သောအဟ်ကမ်များစသည်ဖြင့်-အကျယ်တဝင့်ရေး သားထားပါသည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဤကဲ့သို့သော်သူများအနက်မှတစ်ယောက်ကို-ဂျစ်သာလေဆိပ်၌ဝိုဇူလုပ်ဖို့လာပြီး၊ခြေများကိုမဆာမလုပ်ဘဲ၊သေသေချာ ချာဆေးကြောသွားသူနှင့်၊နောက်တစ်ယောက်ထပ်လာပြီးမျက်နှာနှင့်လက်များကိုဆေးကြောပြီး၊မိမိဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုကာနမာဇ်ဖတ်ဖို့ထွက်သွား သည်ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကဲ့သို့ حاكمအကျိုးအကြောင်းဆင်ခြင်တုံ တရားရှိတော်မူသောပညာရှိအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံ သောအမိန့်များကိုပေးတာဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသလားဟုကျွန်တော်အနေဖြင့်စဉ်းစားမိလေသည်။(လုံးဝဥဿုံမဖြစ်နိုင်ချေ။)
(က) ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)မှဆင့်ပြန် လာသောအကိုးအကားကျမ်း၌အားလုံးတားမြစ်ထားပေသည်။
(၁)ရှိတ်(ခ)သူစီး(ရ.ဟ)အနေဖြင့်ابى الورد ထံမှတဆင့်၊ဆင့်ပြန်သည်မှာ-
ကျွန်တော်အနေဖြင့်(ابى الورد)မှအေမာမ်မိုဟမ္မဒ်ဘာကဲရ်(အ.စ) အားလျောက်ထားသည့်အဘူဇဇ်(ဘ)ရန်းပြောသည်မှာကျွန်ုပ်(အဘူဇဇ် (ဘ)ရန်း)သည်မောင်လာအလီ(အ.စ)ရေကိုပစ်ချပြီးဖိနပ်အပေါ်မဆာပြု သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
အေမာမ်အဖြေပေးသည်မှာ- ابوظبيان မုသားဆိုခြင်းဖြစ်၏။
فِيهِمَا هَلْ: فَقُلْتُ ؟ الخُفَّيْنِ الكِتَابُ سَبَقَ : فِيكُمْ (السلام عليه) عَلِىٍّ قَوْلُ بَلَغَكُمْ أمَا
; رِجْلَيْكَ عَلَى تُخَافُ ثَلْج تَقِيَّةً أوْ مِنْ عَدُوٍّ لاَ إلاَّ : فَقَالَ رُخْصَةٌ؟
ကျွန်တော်( ابى الورد )အနေဖြင့်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခွင့်ရှိပါသလား? ဟုလျောက်ထားရာ၊အဖြေပေးတော်မူသည်မှာ-မရှိ။သို့သော်ရန်သူများအ ကြားရှိ၍နေချိန်၊သကိုင်ယာ၊ပြုရချိန်နှင့်မြေပြင်ပေါ်ရေခဲများပြန့်နေသဖြင့်ခြေ ထောက်အတွက်အခက်အခဲ၊ဖြစ်မည်စိုးရိမ်နေချိန်၌ခွင့်ရှိပေသည်။
ကြောင်းကျော်ကြားနေပါလျက် ابوظبيان နှင့်၎င်းကဲ့သို့သောသူများသည် အဘယ်ကြောင့်အေမာမ်အလီ(အ.စ)ပြောခဲ့ပါသည်ဟုပြောရပါသနည်း?
(မအ်အာဇလ္လာဟ်တစ်နည်းဆိုရလျှင်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) သည်ဖိနပ်အပေါ်မဆာလုပ်ခဲ့ပြီးမပိုင်ဟုလိမ်ပြော၊မုသားပြောသည်ကိုစွပ်စွဲထားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။)၎င်းတို့၏နောက်ကွယ်၌ကြိုးဆွဲသူရှိနေပါသလား?
ဒုတိယ။ ။အေမာမ်အလီ(အ.စ)သည်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင်လူ တိုင်းအတွက်စံမှတ်ကျောက်ဖြစ်ကြောင်းမိန့်တော်မူထား၏။အကယ်၍ကုရ်အာန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရီဝါယတ်ကိုတွေ့ရှိပါက၊မလွဲမသွေရှင်းလင်းချက်၊အကြောင်းပြချက်ကိုသဖ်စီးလုပ်ရပေမည်။(အထူးသဖြင့်ဝိုဇူနှင့်ပက်သက်ပြီး၊အာယတ်တော်စူရဟ်မာအေဒါ၌ပါရှိနေပြီး၊လုံးဝပယ်ဖျက်ခြင်းခံထားရသောအာယတ်တော်၊မဟုတ်ချေ။)(သို့ဖြစ်ပါ၍ရှင်းလင်းချက်သဖ်စီးစသည်ဖြင့်ရှိရပေမည်။)
တတိယ။ ။အေမာမ်မိုဟမ္မဒ်ဘာကဲရ်(အ.စ)အနေဖြင့်လည်းဖိနပ်အပေါ် မဆာပြုခြင်းနှင့်ပက်သက်ပြီးရီဝါယတ်တော်အားမိန့်တော်မူသည်မှာလည်းအရေးကြီးသည့်အချိန်၊ဥပမာအရမ်းအေးပြီး၊ခြေများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင် သောအချိန်ကိုမိန့်ထားပေသည်။ (သကိုင်ယာအချိန်ဖြစ်ပါသည်။)
من لا يحضره الفقيه ၌ဟဒီးစ်တော်တစ်ပုဒ်အားအမီးရွလ်မိုမေနီးမောင်လာ အလီ(အ.စ)ဆီမှ ဆင့်ပြန်ထားပါသည်။
بِسُنَّتِنَا وَلْيَسْتَنَّ فَلْيَقْتَدِ بِنَا مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ فَمَنْ عَلَى الخُفَّيْنِ لاَ نَمْسَحُ... إنّا اَهْلُ بَيْت
“ကျွန်ုပ်တို့အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)များသည်ဖိနပ်အပေါ်မဆာမပြုသော အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)များဖြစ်ချေသည်။မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏နောက် လိုက်ရှီအာဖြစ်ပါက၊ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သလိုလိုက်လုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စွန္နတ်အပေါ်ကျင့်သုံးရပေမည်။
صَلاَتُهُ غَيْرُ يَتُمَّ وَ وُضُوئُهُ لَمْ كِتَابَهُ وَ رَسُولَهُ وَ خَالَفَ اللهَ وَ الخُفَّيْنِ فَقَدْ مَسَحَ عَلَى مَنْ
ဖိနပ်အပေါ် မဆာမပြုဖို့ မောင်လာအလီ(အ.စ)၏ ရီဝါယတ်တော်ကို ဂရုပြုပြီးနောက် ဖခ်ရေရာဇီးဟ်၏ ဗစ်မေလ္လာဟ်ကို တိုးညှင်းစွာဖတ်ရမည်လား၊ အသံကျယ်ဖြင့်ဖတ်ရမည်လားဆိုသည့်ကိစ္စဘက်အာရုံရောက်မိပါသည်။ ရေးသားထားသည်မှာ-အုပ်စုတစ်စုသည်ဗစ်မေလ္လာဟ်ကိုတိုးတိုးဖတ်ရမည် ဟုဆိုပြီးအမီးရွလ်မိုမေနီးမောင်လာအလီ(အ.စ)သည်ကျယ်ကျယ်ဖတ်ရမည်ဟုဆိုထား၏။
نفسه فى دينه و بالعروة الوثقى فقد استمسك لدينه من اتخذ علياً إماماً
ပထမအုပ်စု။ ။မည်သည်စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းချက်မပါဘဲ၊ဖိနပ်အပေါ် မဆာပြုခွင့်ပေးထားပေသည်။
သာဓကအားဖြင့်။ ။စအ်ဗင်အဘီးဝါကာစ်၏ဟဒီးစ်မဲရ်ဖူအာمرفوعه ဖြစ်ပါ သည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ-
الْخُفَّيْنِ بِالْوُضُوءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ
دعا بماء فبال قائماً ثمّ سباطة قوم إلى (إلى عليه وآله صلى الله ) مشى رسول الله
على خفّيه و مسح بماء فتوضأ فجئته
ကျွန်တော်အနေဖြင့်အထူးတောင်းပန်ပြီး၊ရှက်ရှက်နှင့်ပင်မတတ်နိုင်သည့်အဆုံးဤဟဒီးစ်အားဘာသာပြန်ရေးသားပါမည်။(အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာမကာရေမ်းမိုရှီရာဇီး)တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့်လူမျိုးတစ်မျိုး၏အမှိုက်ပုံနားမှကြွမြန်းသွားပြီးနောက်၊အပေါ့သွားတော်မူပြီး၊ကျွန်ုပ်(ဟိုဇိုက်ဖာ)ထံရေတောင်းတော်မူ၏။ကျွန်တော်သည်ရေပေးရာတမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)ကဝိုဇူပြု တော်မူ၍ ဖိနပ်များအပေါ်မဆာပြုတော်မူ၏။
မှတ်ချက်။ ။ကျွန်ုပ်တို့ရှီအာအေမာမ်မိယာများသည်ဤကဲ့သို့သောတမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားစော်ကားပုတ်ခတ်၊သိက္ခာချထားသောဟဒီးစ်များ၊အရေးအသားများ…..ကိုလုံးဝလက်မခံချေ။(ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
ကျွန်တော်အနေဖြင့်မေးခွန်းမေးစရာတစ်ခုသည်ကား-ရိုးရိုးသာမန် သိက္ခာရှိသူ၊အရေးပါသူတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သောသိက္ခာမဲ့သောအလုပ်၊(အမှိုက်ပုံးဘေး၌အပေါ့သွားခြင်း)လုပ်နိုင်ပါသလား?(သို့သော်ကမ္ဘာသိက္ခာအရှိဆုံးလူသားဖြစ်သည့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အား စော်ကားထားကြသည်။ မိုက်ရိုင်းလေစွ! (ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
ဒုတိယအုပ်စု။ ။အရေးကြီးသည့်အချိန်၌ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းကိုလက်ခံ သောအုပ်စုဖြစ်ပေသည်။
သာဓကအားဖြင့်။ ။ရီဝါယတ်တော်တစ်ခု၌မိုကဒမ်ဘင်(န)ရှရီး(ဟ)သည် ဂျနာပေအာအေရှာထံမှတင်ပြသည်မှာ-
على خفافنا يأمرنا بالمسح (صلى الله عليه وآله) مع رسول الله كنّا إذا سافرنا
ကျွန်တော်အနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အတူခရီးထွက် သည့်အခါ ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြု၍အားလုံးကိုအမိန့်ပေးလေ၏။
ကျော်ကြားသောဟဒီးစ်ပါရဂူဘိုင်ဟကီးသည်မိမိစာအုပ်السنن الكبرى စိုနန်နိုလ်ကဘ်ရီကျမ်း၌ صلى الله عليه وآله عليه باب الخف الذى مسح رسول الله ၏ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားထားသည်။ ၎င်းခေါင်းစဉ် အောက်၌ ဖေါ်ပြထားသော ရီဝါယတ်တော်များအရသိရသည်မှာ-မိုဟဂျေးရီး(န) နှင့်အန်ဆာတို့အနေဖြင့်ဖိနပ်အဖွင့်များ၊ အများစု သုံးစွဲကြောင်း သိရပေ သည်။(ဆိုလိုသည်မှာရှေ့ ပိတ်နောက်ဖွင့်ဖိနပ်များကိုဆိုလိုသည်။)
مشققة مخرقة و الأنصار المهاجرين خفاف و كانت كذلك
ဤအတွက်ကြောင့်၎င်းတို့အနေဖြင့်မိမိတို့ဖိနပ်များမချွတ်ဘဲမဆာလုပ်ခဲ့သည်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေများပေသည်။စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုသည်မှာ-ဖိနပ်အပေါ် မဆာပြုရမည်ဟုဟဒီးစ်တော်များကိုတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံမှတင်ပြသောသာဝကများတစ်ခါတစ်ရံသာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၌ ခစားကြပြီး၊ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အနေဖြင့်အမြဲခစားနေသူဖြစ်ပေသည်။
الخفّين على أنْ أمسح إلىّ من قدماى أحبّ لئن تقطع
၁။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်(စူရဟ်မအေဒါ၊အာယတ်၆)အရဝိုဇူပြုရာ၌တာဝန်အစစ်သည်ခြေများအပေါ်(ခြေမျက်စိအထိ)မဆာပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အဟ် လေဘိုက် (အ.စ)နောက်လိုက်ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအားလုံး၏ဖသ်ဝါများအားလုံးသည်လည်း ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
၂။စွန်နီဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအားလုံးနီးပါးအနေဖြင့်ခြေများအား ဆေးကြောခြင်း ကို တာဝန်အစစ်အဖြစ်လက်ခံပြီးအများစုသည်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းကို ခွင့်ပြု ထားပြီး၊အချို့ကအရေးပေါ်အချိန်၌ ခွင့်ပြုထားပေသည်။
၃။အဟ်လေစွန္နတ်၏ဟဒီးစ်ကျမ်းများ၌ဖိနပ်အပေါ်မဆာနှင့်ပက်သက်ပြီး တစ်ခုနှင့် တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဟဒီးစ်တော်များပါရှိရာသုတေသီတစ်ဦးအတွက်သံသယကိုဖြစ်စေပါသည်။
၁၀။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်၏အချစ်တော်
သဝါစိုလ် توسّل ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်များ နှင့်အသိဥာဏ်၊ဆင်ခြင်တုံတရားအမြင်၌
ဝဟာဘီများ၏ခံယူချက်သည်ကားကောင်းမြတ်သောအလုပ်များ ဖြင့်(အလ္လာဟ်ထံတောင်းခံရန်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းသည်ပြဿနာမရှိပေ။သို့ သော် اولياء اللهအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အချစ်တော်များဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း ကိုခွင့်မရှိသည့်အပြင်ရှေးက် شرك ၏အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပေကြောင်းခံယူ ထားပေသည်။သို့သော်ကမ္ဘာမွတ်စလင်များအနေဖြင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်၏အချစ်တော်များဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းကိုပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုခံယူထား ကြသည်။
“သဝါစိုလ်”အဘိဓာန်၌ဝဇီလာအမှီသဟဲရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဝဇီလာဆိုသည်မှာလူသားအားအခြားတစ်ဦးနှင့်နီးစပ်အောင်လုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါ သည်။ ကျော်ကြားသောအဘိဓာန် لسان العرب ၌အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြ ထားပါသည်။
ထိုဝဇီလာသည် أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ဝဇီလာတိုင်းထက်နီးကပ်မှု၊နီးစပ်မှုကို ပို၍ပြုနိုင်သောအရာဖြစ်ပေသည်။ထိုအရာသည်ကား وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရဟ်မသ်အားမျှော်ကိုးခြင်းဖြစ်ပေသည်။ထို့အပြင် وَيَخَافُونَ عَذَابَه အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အပြစ်ဒဏ်၊အဇပ်ကြောက်ဖို့တိုက် တွန်းသောအရာ ဖြစ်ပေသည်။
ဝဟာဘီများ၏အကြီးမားဆုံးမှားယွင်းမှုသည်ကား-အလ္လာဟ်အ ချစ်တော်များနှင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း၏ဆိုလိုချက်ကိုမှားကောက်ခြင်းဖြစ်ပေ သည်။၎င်းတို့အနေဖြင့် အလ္လာဟ်အချစ်တော် اولياءالله နှင့်သဝါစိုလ်ပြု ခြင်းကို كاشف الضر (အဓိပ္ပါယ်မှာအခက်အခဲများ၊သောကဒုက္ခများကိုဖယ် ရှားပေးနိုင်သည်။ထို့အပြင်တိုက်ရိုက်အလုပ်များအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။)ထင်နေကြပေသည်။
အမှန်တကယ်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်လျှင်ရှာဖာအတ်နှင့်သဝါစိုလ်၏အဓိပ္ပါယ်များသည်အတူတူပင်တည်း။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌သဝါ စိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီးအာယတ်တော်နှစ်ပါးသာပါရှိပြီးရှာဖာအတ်နှင့်ပက် သက်၍အမြောက်အများပါရှိပေသည်။မှတ်သေားစရာအချက်သည်ကားစူ ရာဟ်ယေ မာအေဒါအာယတ်တော်၅၇၌ပါရှိသော أقرب أيّهم ဝါကျဖြစ်ပါ သည်။ကောင်းကင်တမန်တော်များနှင့်ဟဇရတ်(သ)အီဆာ(အ.စ)တို့သည်လည်းပဲမိမိတို့အတွက်ဝဇီလာရွေးခဲ့ကြပါသည်။ဝဇီလာသည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးပြုသောအရာဖြစ်၏။ هم အများကိန်း၊သက်ရှိအ တွက်၊နာမ်စားကိုသုံးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
၎င်းအနေဖြင့်ရေးသားထားသည်မှာ-မြောက်များစွာသောလူထု သည် توسّل ၏အမှန်တကယ်ဆိုလိုချက်ကိုမသိနားမလည်ကြပေ။ဤအ တွက်ကြောင့် توسّل၏ဆိုလိုချက်အမှန်အကန်မဖေါ်ပြမည့်အလျှင်အချို့အ ချက်အလက်များကိုတင်ပြဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပါသဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်သောအာယတ်တော်နှင့်ညီသော၊အစ္စလာမ်အကီသာနှင့်မဆန့်ကျင်သောသဝါစိုလ်မှန်သမျှသည်မှန်ကန်ပေသည်။တစ်နည်းဆိုရလျှင်လိုအပ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။ تواترသို့ تواتر အဆင့်နီးပါးရောက်သည်အထိရီဝါယတ်တော်အများအပြား သဝါစိုလ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ပါရှိပေသည်။
၁။တမန်တော်မြတ်ကြီးအာဒမ်(အ.စ)အနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)အားဝဇီလာပြုခဲ့ခြင်းသဝါစိုလ်ပြုခဲ့ခြင်း၊ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မမွေး ခင်အလျင်ကဖြစ်ပေသည်။ حاكمအနေဖြင့်မိမိကျမ်း مستدرك ၌ဟဒီးစ်ပါရဂူ အုပ်စုတစ်စုထံမှတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
انه لااَحَبُّ الخلق إلىّ ၎င်းမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည်ကျွန်ုပ်၏အဖန်ဆင်းခံများ၌ ကျွန်ုပ်အချစ်ရဆုံးသူဖြစ်ပေသည်။
ابن عساكر အနေဖြင့်မိမိ၏စာအုပ် فتح البارى၌တင်ပြထားသည်မှာ-မက္ကာရွှေမြို့ တော်တွင်ကပ်ဆိုက်သည့်အခါကိုရိုင်ရ်ှလူမျိုးများသည် ဟဇရတ်သ်အဘူ သွာလစ်ပ်(အ.စ)ထံ ရောက်လာကြပြီး လွင်ပြင်အားလုံး (နိုင်ငံတွင်းဒေသအားလုံး)ခြောက်သွေ့သွားလေသည်။ကပ်ဆိုက်လာသည်ဖြစ်သဖြင့်ငါတို့ကအ် ဗာကျောင်းတော်သို့ သွားပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ မိုးအတွက် ဒိုအာတောင်းကြမည်ဟုပြောဆိုကြလေ၏။
သို့သော်ဤစာအုပ်ရေးသူ رفاعى သည်သဝါစိုလ်နှင့်ပက်သက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်စီစစ်သူ၊သုတေသီပြုပြီးတင်ပြသူဖြစ်ပေသည်။၎င်းအနေ ဖြင့်စွန်နီပညာရှင်များ၏အကိုးအကားကျမ်းစာအုပ်အသီးသီးမှသဝါစိုလ်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး၊ဟဒီးစ်တော်၂၆ခုကိုတင်ပြခဲ့ပြီးအချို့ဟဒီးစ်တော်များအားပယ် ဖျက်ခဲ့လေ၏။သို့သော်အချို့ဟဒီးစ်တော်များအားဟဒီးစ်ပညာအရသဝါသိုရ် (تواتر)အထိအဆင့်ရောက်ရှိနေပြီးကျော်ကြားသောစွန်နီကျမ်းဂန်များ၌ပါရှိ နေသဖြင့်မပယ်ဖျက်ဘဲလက်ခံထားပေသည်။